Wasiir ku xigeenka xafiiska jidadka iyo gaadiidka oo wareysi siiyey warbaahinta deegaanka. - Hargeele - Wararka Somali State
Wasiir ku xigeenka Eng. Cabdiqaadir Bashiir Axmed oo xafiiskiisa ugu wareymey warbaahinta deegaanka ayaa waxa uu ka war bixiyey waxyaabihii u qabsoomey xafiiska, iyo mashaariicaha ay fulinayaan hada.
Xafiiska ayaa haatan gacanta ku haya 31 mashruuc oo ah dhismaha 17 mashruuc oo iskugu jira buundooyin iyo jidadka laga wado deegaanka oo sanadkii hore ka soo wareegey isla markaana ay ku baxeyso lacag dhan laba bilyan, todoba boqol sagaashan iyo sadex milyan boqol sideetan iyo sadex kun sagaal boqol iyo lix iyo toban birr waxaana barbar socda mashariicaha dhanka jidadka iyo buundooyinka sanadkan oo dhan 14 mashruuc.
Waxaa aad dar dar galin xoogan lagu sameeyey isbadalka ka dhacey deegaanka ka dib dhismayaasha jidadka, qurxinta magaalooyinka iyo guud ahaan mashaariicda horumarinta ee kala duwan.
Qiimaynta wax qabadka 3dii bilood ee la soo dhaafey ee gobolka Faafan oo furmay.